á€–á€­á€¯á€¸á€žá€­á€á€ºá€„á€¹ - MYSTERY ZILLION
memory stick can't written .. ?????	rat said:OK USB Stick ကို Detect ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒေါင်းလုပ်ဆွဲကြည့်ပါ
ကျွန်တော့်USB ကတော့ good တွားဘီ
Good Luck ပါ
USB stick not found........ :confused::confused::confused::co…
Comment by á€–á€­á€¯á€¸á€žá€­á€á€ºá€„á€¹
memory stick can't written .. ?????	i also try this.. bro.. but.. it can't solve the problem.. :frown:
is there any solution.......... ?????????????????????
Nvidia VGA card driver ..??????????????????	ဟုတ်ကဲ့.. dl လုပ်နေတယ်ဗျ.. ကျွန်တော်သိချင်တာက .. အဲ့ version မှန်ရဲ့လား ဆိုတာပါ..
kaspersky key တောင်းချင်တာ (ဘယ်ကတောင်းရမယ်မှန်းမသ&#4	" antivirus အတွက် kav key ဆိုတာနဲ့ internet security အတွက် kis key ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး generate လုပ်လို့ရပါတယ်။ " ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ ဗျ... ဘာမှလည်း လုပ်လို့ မရပူး... ငို လိုက်မှာနော်.. ဟင့်... ကျွန်တော်က kaspersky inte…
USB right protected....	nobody answer my Q? ... >__________________<
Pls........... Help me...........................................
May I help You.......	ကျေးဇူးပါဗျာ.. :)
:( ဒေါင်းလို့ မရပူးဗျာ.. mediafire ကဖြစ်ဖြစ် ပြန်တင်ပေးပါလား..
ဘာသင်တန်းတွေ တတ်မလဲ	C++ ကို ရန်ကုန်မှာ ဘယ်သင်တန်းကကောင်းလညး်.. ပြောပြပေးပါလား........???????????????????
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် စိတ်၀င်စား လို့ သွားတက်တာ..(နံမည်တော့ မပြောတော့ပါပူး) တစ်သိန်းကျော်ပေးရပီး.... ဘာမှ မတတ်လာပူးဆိုလို့ပါ.. ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း မသင်ပူးတဲ့.. သင်တန်း…
Registry Key ............. :((((((( plz help.. me..... !!!!!	ya.. i will keep using......
but .......... :( i still haveaworry about that.. is there anything (error) happen.......??????????????
Registry Key ............. :((((((( plz help.. me..... !!!!!	မလွယ်ပါ........... :((
ကျွန်တော် စမ်းပီးပါပီ... install program list မှာ ဘာမှ မတွေ့ရပါ... :((
May I help You.......	UniblueRegistry Booster Fullversion လေး လိုချင်ပါတယ်.. UFS explore professional full version လေးပါ လိုချင်ပါတယ်.. မစ ကျပါ.......... :D
Registry Key ............. :((((((( plz help.. me..... !!!!!	i'm already try it bro... i make system restore " go to earlier time " but.. isn't work.. :(( :((
Registry Key ............. :((((((( plz help.. me..... !!!!!	Format ချလို့ မဖြစ်လို့ပါဗျာ...
တစ်ခြား နည်း မရှိတော့ပူးလားဟင်... ပြန်ပြင်လို့ ရတဲ့ software (သို့) manual နည်းလမ်းများ မရှိတော့ပူးလားဗျာ..
May I help You.......	ကူညီကျပါအုံးဗျို့...................
နဲနဲ အရေးကြီးလို့ပါ.. း(((((((((((
နောက်တစ်ခု ထပ်တောင်းချင်ပါတယ်.. system information for window ( siw ) fullversion portable လိုချင်ပါတယ်.. အရေးကြီးလို့ပါ.. ကူညီကျပါ..
May I help You.......	exiter said:Warmly welcome every body....
Gmail to Gmail Backup လုပ်ရအောင်။ (Official)	chat ထားတာတွေကို ဘယ်လို ယူရမလဲဟင်..
မေးလ် တစ်ခုကနေ inbox ထဲက မေးလ်တွေ .. ချက်ထားတဲ့ record တွေ.... အားလုံးကို နောက်ထပ်မေးလ် တစ်ခုကို forward ပို့ချင်လို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သိရင် ပြောပေးကျပါ.. (gmail ပါ)
အားလုံးပဲ ကျေးဇူး.. း)
full speed int…
LetitBit.net Premium Account	download ကဘယ်လို လုပ်ရတာလဲဟင်..
ကျွန်တော် file တစ်ခု ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါ..
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသိလို့..သိတဲ့သူများ ပြောပေးကျပါနော်..
window မှာ beeping song မထွက်တော့လို့ပါ...	kyishaung said:control panel ထဲက sounds and audio device ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါ(ဟုတ်မလားဘဲ)
ဒါမှ မဟုတ် အောက်က နာရီနားမှာ sound ညှိုတာလေးရှိပါတယ် အဲ့ကောင်ကို right click လုပ်ပြီး adjust audio properties ဆိုတာရှိတယ်၀င်လိုက်ပါ နောက် ၀င်ပြီးရင် sound tab …
ကျနော်ပို့ပေးမယ်	အစ်ကို ရေ ကျွန်တော့ကိုလည်း ပို့ပေးပါအုံးနော်.. :)
G-mail မှာ...	kyishaung said:gamil ထဲ၀င် ပြီးရင် ညာဘက်အပေါ်နားမှာ setting ဆိုတာရှိပါတယ် အဲ့ထဲ၀င်ပါ
နောက် vacation responder: ဆိုတာရှိပါတယ် general ထဲမှာပါပဲ..
အောက်နည်းနည်းဆင်းပြီးရှာလိုက်ပါ ရှိပါတယ် အဲ့ဒီနေရာမှာ radio button နဲ့
vacation responder off /on ဆိုပြီ…
Downlader တစ်ခုလောက်တင်ချင်လို့ပါကူညီပေးကြပါ	naungnow said:MZ မှအဖွဲ့၀င်များခင်ဗျား:77:
Firefox နှင့်တွဲသုံးရန်အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဒါ လေးတစ်ခုလောက်လိုချင်လို့ပါ၊ ကျနော့မှာ mz ကဆွဲထားတဲ့ desetup , fdm , Orbit download software များရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အင်စတောလ်လုပ်ပီးသွားရင် firefox နဲ့ application ဘယ…
Rapidshare မှ လိုချင်သော File တောင်းဆိုနိုင်	http://rapidshare.com/files/156710867/Nrt_Int_Scrt_09.rar
Admin Password	ye htet said:
ရုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားတော့ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက ရုံးမှာတာ၀န်ရှိတဲ့သူနဲ့ အရင် ညှိကြည့်ပါလားဗျ။ ဒီလိုဗျ........:d:d:d
ကျွန်တော့် စက်မှာ ကျွန်တော်မရှိတုန်း it သမားက ပညာလာပြသွားတာဗျ.....
ကျွန်တော်က it မဟုတ်ပါ%
Admin Password	Alexander said:MZ က Admin တို့ရေ ...
သူ့၀င်တဲ့ IP ကျနော်တဲ့တူလားလို့တစ်ချက် check ပေးပါဗျာ ..
FRC ကဆိုလို့ကတော့ ... ဟွန်း ဟွန်း :68:
XP SP2 ဆိုတော့ ဒီကတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ :P
ကျွန်တော့ ရုံးက ရန်ကုန်က ပါ...
Admin Password	Moe Zatt Ko said:အဲဒီမှာ [URL]http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=3382&highlight=Windows+password+%26%234096%3B%26%234141%3B%26%234143%3B[/URL] တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ တစ်ခြားကျော်နိုင်တဲ့ နည်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်..
Gmail hacking	G-mail trace လိုက်တာကို..သိချင်လို့ပါ...
step by step လေးပြောပေးနိုင်ရင် ပြောပေးကြပါနော်.....
:39: :39: :39: :39: :39:
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	အစ်ကိုတို့ရေ...:)
www.keyGenGuRu.com လိုမျိုး serial key တွေ ရှာလို့ရတဲ့ site လေးတွေရှိရင် မျှေ၀ပါအုံး..
Desktop wallpaper...!	:77: :77: :77: :77: :77:
Portable Version လေးရောရှိနိုင်မလားခင်ဗျာ..
Desktop wallpaper...!	\_:D/\_:D/\_:D/\_:D/\_:D/\_:D/
window XP SP-2 ကိုသုံးနေတာပါခင်ဗျာ...
Memory ကတော့ 351MB ပဲရှိပါတယ်...
BitLocker Drive Encryption	:o:o:o:o:o:o:o
ကျွန်တော်လည်း ခုမှ ကြားဖူးတာပါ..
High Quanity Wallpaper Sites	:6::6::6:
Notice For Cafe Owners & Please Help Me	:2::2::2::2:
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် က USB drive ပျောက်တာပါ...
ကျွန်တော် စုထားတဲ့ Data လေးတွေနဲ့ software လေးတွ…
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	http://www.scanwith.com/
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို internet ကနေ free scan လုပ်လို့ရပါတယ်။
safe site ပါ။
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	http://www.myanmarinternetjournal.com/
internet journal နောက်ဆုံးထွက် အထိကို တင်ပေးထားတာပါ။
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	http://www.pendriveapps.com/
portable tool & software လေးတွေပါ။
တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင် ရှိပါတယ်။
safe site ပါပဲ။
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	http://lovmefrx.googlepages.com/gtalk
browser ထဲမှာတင် ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
browser bookmark toolbar ပေါ် မှာ bookmark ပေးပြီးတော့ icon တင်ပြီ…
website ကောင်းကောင်းလေးတွေ	:) software အားလုံးနီးပါးလောက် စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်..:):):)
Free ပေးထားတာတွေရော shareware ရော တော်တော်လေးစုံပါတယ်။
safe site ပါ။ :D:D:D
Certification	ကို ဒီမွန်ပြောတာလေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ သိသင့်တာလေးတွေ သိထားတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လို ကွန်ပြူတာကို ခုမှ စတင်လေ့လာ သူတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Kaspersky 2010 (Kaspersky Version 9)	trial version ဆိုတော့ feature အားလုံးသုံးလို့ရပါ့ မလားမသိ။ ပြောပေးပါအုံး။ စမ်းသုံးကြည့်မလို့ပါ။ အခုတော့ avira free version သုံးနေပါတယ်။ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလည်းမသိ.... :P
Windows XP ရဲ့ Password ကိ်ု ကျော်လွှားခြင်း	ခုလို ဆွေးနွေးချက်တွေ ဖတ်ရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Tracing နဲ့ပတ်သက်လို့...	nice bro.. :)